ယဉ်ကျေးမှုများစွာမှ ကျောင်းသားများသင်ယူနိုင်သော ဆက်ဆံရေးဆံပြီး အသက်တာပြောင်းလဲစေသည့် လက်တွေ့ဆန်သော ထူးခြားသည့်ကျောင်း
CMM ဓမ္မကောလိပ်၏ ထူးခြားချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့ကို အခြားကျောင်းများနှင့် ခြားနားစေသော ထူးခြားချက်လေးချက်မှာ
၁။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လေ့လာခြင်း
ကျောင်းသားများသည် ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြသည့်အရှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အားပေးသည်။ သို့မှသာ နှလုံးသား၌ ဉာဏ်ပညာ၊ ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြခြင်းတို့နှင့်ပြည့်ဝလာပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ သဘာဝအဖြစ်တော်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်လာပေမည်။ ထိုမှ ကျောင်းသားများ၏ အသက်တာများလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်လာကြသည်။
ရလဒ်များ – ကျောင်းသားများသည် သူတို့ဖွင့်ပြမှုရသည့် အရာများကိုရေးသားရင်း သူတို့၏နှလုံးသားများပြောင်းလဲလာကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည်။
၂။ သခင်ယေရှုကို မျှော်ကြည့်၍ ကျွန်ုပ်တိုရှေ့က သွားခဲ့သောသူများကို ဂုဏ်ပြုခြင်း
သင်ကြားခြင်းနှင့် အချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့က သွားခဲ့ကြသော လူသိများသည့် ကျမ်းစာပညာရှင်များနှင့် လူသိနည်းသည့် ကျမ်းစာပညာရှင် တော်တော်များများက ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြမှုရေတွင်းများ တူးခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ထိုတွင်းများမှ ရေကို ယနေ့အထိသောက်သုံးနေကြဆဲဖြစ်သည်။ CMM ဓမ္မကောလိပ်၏ ရည်မှန်းချက်များအနက် တစ်ခုမှာ ထိုရေတွင်းများကို မြည်းစမ်းနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ လူသားများနှင့် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်အတွက် ထိုသို့ဆက်ကပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အရေးပါမှုကို လစ်လျူမရှုစေရန်ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားများသည် သင်ယူရသောအချက်အလက်များကို နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ယှဉ်ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ ထိုကြောင့် ဘွဲ့ရများသည် ခက်ခဲသောမေးခွန်းများ၊အတွေးအခေါ်အမျိုးမျိုး သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သက်တောင့်သက်သာရှိသော ရပ်ဝန်းအပြင်ဘက်ရှိ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ရင်ဆိုင်ရန် မကြောက်တော့ပါ။
ယခုမျက်မှောက်ကာလတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားနိုင်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်အရေးကြီးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ကျောင်းသားတိုင်းသည်လည်း လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင် မိမိကိုယ်ပိုင် ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြမှု ရေတွင်းများတူးရန် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ သိုမှသာ ကမ္ဘာမြေမတည်ရှိမီကပင် ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားတော်မူသောနိုင်ငံတော်ရှိ သူတို့ဆက်ကပ်ပါဝင်ရမည့် အခန်းကဏ္ဍအသီးသီးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကြမည်ဖြစ်သည်။
ရလဒ်များ – ကျောင်းသားများသည် သမ္မာကျမ်းစာကပြောသည့်အရာတို့နှင့် ကျမ်းစာပညာရှင်များက ပြောသည့်အရာတို့ကို နှိင်းယှဉ်လေ့လာကြသောအခါ သူတို့၏ နားလည်မှုနှင့် အသိပညာများ ပြောင်းလဲလာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည်။
၃။ မိတ်ဆွေဖွဲ့သင်ယူခြင်း / ဆွေးနွေးမှုများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများသည် အတန်းမတိုင်မီတွင် ကြိုတင်လေ့လာပြီး၊ အတန်းအတွက် ပြင်ဆင်ရသည်။ထိုသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးနောက်၊ အတန်းတွင်း ဆွေးနွေးချိန်များတွင် ပြန်လည်မျှဝေကြသည်။ ဤသင်ယူမှုပုံစံသည် Chavrusa ဟုခေါ်သော ဂန္ထဝင်ဟီဘရူးသင်ယူမှုအမျိုးအစားပင်ဖြစ်သည်။ chavruta သိုမဟုတ် hehavruta ဟုလည်းစာလုံးပေါင်းကြသည်။ (Aramaic: אָ ותּרְ בַח ,lit. “friendship” or “companionship”)။ Chavrusa ပုံစံသင်ယူမှုသည် ကျောင်းသားတစ်ဦးစီအား စာသားကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်ရန်၊ အတွေးများကို ယုတ္တိဆန်သောဆွေးနွေးမှုများအဖြစ် စုစည်းနိုင်ရန်၊ ရှင်းပြနိုင်ရန်၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်ရန်၊ အခြားကျောင်းသားများ၏ဆွေးနွေးတင်ပြချက် တို့ကိုလည်း နားထောင်နိုင်ရန်၊ မေးခွန်းထုတ်နိုင်ရန်နှင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အတွေးအမြင်များကို ထက်မြက်နိုင်စေရန် အနေအထားများဖန်တီး ထားပေးသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် စာသား ၏အဓိပ္ပါယ်ကို လုံးဝထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များ ရရှိစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော နည်းပြဆရာများသည် ကျောင်းသားများအား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဆွေးနွေးမှုများပြုရန် ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ၎င်းတို့၏ တွေးခေါ်မှုဖြစ်စဉ်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနိုင်ရန် အားပေးရာရောက်သည်။ သူတို့ ဘာကိုတွေးရမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မပြောပါ။
ရလဒ်များ – ကျောင်းသားများသည် အခြားသူများကို နားထောင်တတ်ပြီး အတွေ့အကြုံအားဖြင့် ကြီးထွားလာသောအခါတွင် ရရှိသောဉာဏ်ပညာအားဖြင့် ကြီးထွားပြောင်းလဲလာကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။
၄။ အသီးသီးပြီး အောင်မြင်သောအသက်တာသို့ သွားရမည့်လမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်း
ကျောင်းသားများစွာသည် သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှာဖွေရန်၊ ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးအသက်တာများဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့အပိုင်ဖြစ်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာကပြောထားသော ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်း၌အသက်ရှင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းသို့ဆာငတ်စွာရောက်လာကြသည်။ ကျောင်းသားများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို နားထောင်တတ်ရန်နှင့် ပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်း၌ ကြီးထွားလာရန်သင်ယူနေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကိုပလ္လင်တော်ခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် သူတို့အတွက် ဘုရားသခင်ကြံစည်ရေးဆွဲထားသောလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။
ရလဒ်များ – ကျောင်းသားများသည် ရှေးမဆွကပင် သူတို့အတွက်ပြင်ဆင်တော်မူသော ကောင်းသောအမှုများနှင့်ဆိုင်သည့်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိစေမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်အစုံကို အခွင့်ပေးလာကြသည်။ လမ်းညွှန်တိုင်ပင်မှုများဖြင့် ပြောင်းလဲလာကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ (ဧဖက် ၂:၁၀ )
ဘုရားသခင်အား နက်ရှိင်းစွာဆာငတ်လာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ဆန္ဒရှိသည်။ ထိုဆန္ဒမီးကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါမောက္ခများက အသက်တာပြောင်းလဲစေသော ကြုံတောင့်ကြုံခဲနည်းလမ်းများဖြင့် တောက်လောင်စေသည်။ ဤအရာသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မည်သည့်ကျောင်းတွင်မဆို တွေ့နိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှုတော်ဆောင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားရာပေါင်းများစွာထံမှ ယုံကြည်မှုနှင့် လေးစားမှုတို့ကို ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။များစွာသောသူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့် တစ်သက်တာဆက်ဆံရေးများကို တည်ဆောက်ကြသည်။
ASSOCIATE OF MINISTRY in Biblical Studies ၏ ပန်းတိုင်
သင့်အား ဘုရားသခင်နှင့်လည်းကောင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာနှင့်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌သာမက၊ နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်း၌ပါ ဘုရားသခင်အား နားလည်အကျွမ်းဝင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ချည်နှောင်မှုများနှင့် ဘာသာရေးဆန်မှုမှ သာ၍ကြီးမားသောလွတ်မြောက်ခြင်းကို တွေ့ကြုံခံစားစေရန်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌ဖြစ်တည်မှု၊ ဘုရားသခင်၏ အချိန်ဇယား အစရှိသော အခြေခံနိယာမတချို့ကို အုတ်မြစ်ချပေးရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပန်းတိုင်မှာ အသိပညာကို ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားမှုနှင့် ယှဉ်တွဲပြီး ကျောင်းသားအားလုံးကို တည်ဆောက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ မျက်မှောက်လောကတွင် သမ္မာတရားအတိုင်း ထိရောက်စွာအသက်ရှင်ပြသနိုင်ကြပေမည်။ CMM ဓမ္မကောလိပ် ဘာသာရပ်များသည် သင့်အား ကြီးထွားရင့်ကျက်စေရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ရေးသားလုပ်ဆောင်မှုများသည် အသက်တာများကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင် ပါဝင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသည်။
CMM ဓမ္မကောလိပ်သည် hybrid စာသင်ခန်းပုံစံ၌ ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြမှုများ ရစေနိုင်မည့် လေ့လာမှုပုံစံဖြင့်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများကိုဖြစ်စေသည့် ဓမ္မဗေဒ အမှုတော်မြတ်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းကို ရှေ့ဆောင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျောင်းသားများသည် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း၌ Associate, Bachelor, Master, Doctorate နှင့် Ph.D. ဘွဲများကို အဆင့်ဆင့်တက်လှမ်းနိုင်ပါသည်။ ဓမ္မကောလိပ်အနေဖြင့် ကျောင်းသားများကို ယုံကြည်ခြင်း၏ အခြေခံသမ္မာတရားများကို ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြမှုဆိုင်ရာ သင်ကြားမှုပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထိုသိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများသည် ဝိညာဉ်တော်နှင့် သမ္မာတရားအားဖြင့်လောကကြီးကို တပည့်တော်ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။
Dr. Jorge Parrott သည် ဓမ္မကောလိပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး CMM World Missions (CMM = Correll Missionary Ministries / Christ’s Mandate for Missions) ၏ သာသနာညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သည်။ CMM ဓမ္မကောလိပ်ကျောင်းသားများသည် သာသနာနယ်များသို ခေါ်ခြင်းခံရပါက ပန်းတိုင်ရောက်ရှိစေရန်အတွက် ရေတို၊အလယ်အလတ် နှင့် ရေရှည် အလုပ်သင်နေရာချထားခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိသည်။ CMM သာသနာကွန်ရက်တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၇၀ ရှိ အသင်းတော်များ၊ ကျောင်းများ၊ မိဘမဲ့ဂေဟာများနှင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများကို တည်ထောင်သော သာသနာပြုခေါင်းဆောင်များ ထောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်သည်။ CMM သာသနာသည် ယဉ်ကျေးမှုနယ်နိမိတ်များဖြတ်ကျော်သည့် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများ၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာတုံပြန်မှုများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကူညီမှုများ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသော အသင်းတော်များအားကူညီမှု အစရှိသည်တို့ကိုလည်းလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။
ဓမ္မကောလိပ်၏ သာသနာနှင့် ရူပါရုံ
CMM ဓမ္မကောလိပ် သည် ဘုရားသခင်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေခြင်းအားဖြင့် စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် ဆာငတ်မှုတို့တွင် ကြီးထွားလိုသော ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကို မြေတောင်မြှောက်အားပေးရန် ဆက်ကပ်အပ်နှံထားပါသည်။ ကျောင်းသားများသည် ကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်တတ်ရန် သင်ယူပြီး၊ အသစ်သောနည်းလမ်းများဖြင့် လေ့လာနိုင်စေရန် ကူညီပေးသည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့၏ပန်းတိုင်အသီးသီးကို ရောက်ရှိကာ၊ သူ့တိုအား ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသော နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြမည် ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းသားများကို ဘုရားသခင်နှင့် ဦးစွာပထမ ချိတ်ဆက်ပေးပြီး၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် တိုးပွားစေရန်အတွက် သူတို့ပတ်လည်ရှိလူများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများ၏ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းအားဖြင့် နက်ရှိင်းမှု၊ အခွင့်အာဏာနှင့် ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်များ၌ တိုးတက်ကြီးထွားစေရန် တည်ဆောက်ပျိုးထောင်ခြင်း၌ ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျှက်ရှိသည်။ (ဧဖက် ၄:၁၁-၁၃)
“အသိညဏ်မှ နှလုံးသား၊ နှလုံးသားမှ ကမ္ဘာ လောကကြီးဆီသို့။”
CMM Theology President
CMM Theology Myanmar Director
Dr. David Joy, M.B.,B.S.(UM1), M.Th., Th.D.(CMM), သည် ဓမ္မဗေဒဆိုင်ရာ adjunct ပါမောက္ခ၊ သင်းအုပ်ဆရာ၊ စာရေးဆရာ နှင့် ဆေးပညာဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မှစ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၊ ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်တို့နှင့်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဝိညာဉ်တော် တန်ခိုးနှင့်စတင်ဟောပြောခဲ့သည်။ သူသည် ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) တွင်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွင် သမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားခြင်း၊ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဟောပြောခြင်း၊ လူငယ်အဖွဲ့များကို ဦးဆောင်ခြင်း၊ သာသနာနယ်များ၌ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
M.B.,B.S. ဘွဲ့ရပြီးနောက် သာသနာနယ်များတွင် ပိုမိုဆက်ကပ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ဓမ္မပညာ (theology) သင်ယူခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ တောင်ခယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၊ ဖို့တ်မေးလ်မြို့ရှိ CMM College of Theology မှ မဟာဘွဲ့နှင့် ပါရဂူဘွဲ့များရရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သာသနာနယ်များတွင် ဆက်ကပ်ပါဝင်ခဲ့သည်။
CMM World Missions နှင့်မြန်မာနိုင်ငံဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်မဟာမိတ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော Prophetic Revolution Ministries ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ကြီးကြပ်သူခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်သည်။ သူ့အား Dr. Jorge Parrott (CMM World Missions) မှ လက်တင်မင်္ဂလာပေးထားပြီး ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးသူများ၊ ပျောက်ဆုံးသောသူများနှင့် ဝေဒနာခံစားနေသူများကို အစေခံရန် ခရစ်တော်၏ခန္ဓာတော်ဖြစ်သော အသင်းတော်နှင့် ကမ္ဘာ လောကဆီ ခွဲ့ခန့်စေခိုင်းခြင်းခံရသည်။
ပါရဂူဘွဲ့ရပြီးနောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှစတင်ကာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ CMM College of Theology ၌လည်း adjunct professor အဖြစ်သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိသည်။ သူသည် Prophetic Revolution Mission School နှင့် Prophetic Revolution Church အပါအဝင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် လူတို့ထံအမှုတော်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။ သူသည် Rev. Bart & Kim Hadaway (A Heart Like His Ministries), Craig & Cathy Koetsier, Dr. Jorge Parrott, Dr. Nancy G. Daniel (CMM World Missions), နှင့် Rev. Peggy Anderson (Destiny’s Cry Ministries) တို့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာ လွှမ်းခြုံမှုအောက်၌ အမှုတော်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။ သူသည် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တည်ဆောက်ထားသော အသက်တာနှင့်အသက်ရှင်သူဖြစ်ပြီး လူတို့နှင့်စစ်မှန်စွာဆက်ဆံရသည် ကိုနှစ်သက်သူဖြစ်သည်။
Dr. Nancy G. Daniel,
CMM Theology Global Dean
Dr. Nancy G. Daniel, B.A., Th.M., Th.D., Ph.D., D.Min., သည် ယုံကြည်သူများ ဘုရားသခင့် မေတ္တာတော်၏ ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းကို သိရှိလာရန်၊ ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်မှုကို ခံယူရန်၊ မိမိတို့၏ ဖြစ်တည်ခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊ ရိတ်သိမ်းရန်အတွက် စုံလင်စွာရင့်ကျက်စေသော ကိုယ်တော်၏ အတိုင်းထက်အလွန် ကြီးမားသော တန်ခိုးတော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် နှင့် နိုင်ငံတော်၌ မိမိတို့လျှောက်ရမည့်လမ်းကို တွေ့ရှိရန်အတွက် အသက်တာများကို တည်ဆောက်ပေးရန် ဆက်ကပ်ထားသည်။
သူသည် MorningStar University နှင့် ယခုတွင် CMM College of Theology တို့၌ မဟာဌာနမှူးအဖြစ် ၁၀ နှစ်ကျော်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို နှုတ်ကပတ်တော်၏ ခိုင်ခံ့သောအခြေခံအုတ်မြစ်များပေါ်၌ သွန်သင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရင်း နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ၌ ကျောင်းများတည်ထောင်ခဲ့သည်။
Dr. Nancy ယုံကြည်သည်မှာ အသိပညာနှင့် သမ္မာတရားတို့သည် ဦးခေါင်းတွင်အစပြုနိုင်ပြီး၊ ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်ရရှိစေသော သင်ယူလေ့လာမှုပြုသောအခါ ၎င်းတို့သည်စိတ်နှလုံးထဲသို့ဆင်းလာကာ၊ နိုင်ငံတစ်ခုလုံး ပြောင်းလဲနိုင်ပေသည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ “ဦးခေါင်းမှ စိတ်နှလုံးသို့၊ ထိုမှ လောကထဲသို့။”
ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို ဖန်တီးရသည့်အကြောင်းမှာ သင်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဦးဆောင်မှု၌ လေ့လာ၊ မေးမြန်း၊ ဆုတောင်း၊ အောက်မေ့ဆင်ခြင်ဖတ်ရွတ်၊ နားထောင်၊ ဖွင့်ပြချက်များကိုချရေးခြင်းဖြင့် ခမည်းတော်နှင့် သာ၍ကြီးမားသော ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုသို့ ရောက်ရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်မှုတွင် သင်တို့၏ ဝိညာဉ်၊ စိတ်၊ ခန္ဓာပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤခရီး၏ ပထမခြေလှမ်းကို စလှမ်းပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ယုံကြည်ခြင်း၌ ကြီးထွားစေပါ။
Yvonne Ba Myaing
Saw Saw Lu
Associate degree စာသင်နှစ်သည် $2400 ရှိသော်လည်း၊ လက်ရှိပဋိပက္ခအခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအားဖြင့် ယခုစာသင်နှစ်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားပေးသည်။
Degree Down payment Monthly Total
Certificate Program $35 $70 $665
Associate of Ministry in Biblical Studies – Myanmar (မြန်မာနိုင်ငံမှ တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားများ) $35 $75 $710
Associate of Ministry in Biblical Studies – International (အခြားနိုင်ငံများမှ တက်ရောက်မည့် မြန်မာကျောင်းသားများ) $35 $115 $1070
ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်အတွက် သင်သည်အောက်ပါတို့ကို နားလည်သဘောပေါက်ကာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
ကျောင်းသားများသည် အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးဖြစ်ကာ၊ သခင်ယေရှုကို သခင်အဖြစ်ဝန်ခံပြီး ဖြစ်ရမည်။
ကျောင်းသားများသည် နောက်ကျောင်းရာဇဝင်စစ်ဆေးခံရန် ဆန္ဒရှိရမည်။
ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာဖောင်ကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ရမည်။ ပတ်စ်ပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ ၁ပုံ ပေးပို့ရမည်။Application နှင့် Program fees စုစုပေါင်း 35$ ပေးသွင်းရမည်။
လျှောက်ထားသူသည် အမှုတော်၌ပါဝင်သည့် အတွေ့အကြုံကို စာစီကာ ပေးပို့ရမည်။ အရေးအသားနှင့် သဒ္ဒါပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပေးပါ။
ကျောင်းသားများ၌ အထက်တန်းအောင်လက်မှတ်တစ်ခုခု ရှိရမည်။ လျှောက်ထားသူ၏ အထက်တန်း (သို့) ကောလိပ် ပညာရေးမှတ်တမ်း တရားဝင်မိတ္တူ ပေးပို့ရမည့်။ အောင်လက်မှတ်/ဘွဲ့လက်မှတ် ပေးအပ်သည့်ရက်စွဲ ပါရှိရမည်။ (Certificate program တက်မည့်သူများဖြစ်ပါက မလိုအပ်ပါ။)
လျှောက်ထားသူ၏ လက်ရှိသင်းအုပ်ဆရာ ထောက်ခံစာပါရှိရမည်။ သင်းအုပ်ဆရာသည် မိသားစုဝင်မဖြစ်ရပါ။
မြန်မာစာပေနှင့် ဘာသာစကား ရေးနိုင်ပြောနိုင်ရမည်။
ကျောင်းသားတိုင်းသည် သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင် သခင်အဖြစ် လက်ခံပြီးကြောင်း သက်သေခံချက်ပေးပို့ရမည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းသည် သခင်ယေရှုကိုသော်လည်းကောင်း၊ CMM ကိုသော်လည်းကောင်းကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်စေရန် မည်သည့်အချိန်မျှ မပြုမူရပါ။
ကျောင်းသားတိုင်းသည် ဒေသန္တရအသင်းတော်တစ်ပါး၌ တက်ကြွစွာပါဝင်သော အသင်းသားဖြစ်ရမည်။ ပါဝင်လုက်ဆောင်သော နာရီများကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး CMM ရုံးသို့ တင်ပြရမည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာရုံမျှသာမပြုဘဲ၊လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်သောသူများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့်နာရီများကို semester credit hours အဖြစ် တွက်ချက်သည်။
CMM ဓမ္မကောလိပ်မှ မည်သည့် နိုင်ငံသား/ တိုင်းရင်းသား/လူမျိုးစုဝင် တို့ကိုမဆို၊ သက်ဆိုင်ရာ စာသင်နှစ်နှင့် ကျောင်းသားများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ၊ ကြိုဆိုလက်ခံမည်ဖြစ်သကဲ့သို တူညီသောအခွင့်အရေး နှင့် ပါဝင်နိုင်သည့် အစီအစဥ် များအားလုံး ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရုံးဖုန်း – 0933535353